Shiinaha 50mm / 55mm / 63mm Dhir Boobe ah 4 Digirta Zinc Alloy Spice Crusher Soosaarka iyo Warshadaha | Hemgrinder
50MM / 55mm / 63mm Gob Booqday 4 xabbo oo zinc Alloy udgoon xawaash
HALISTA MACAANKA QARANKA, KHATARTA CUNTADA - Qulqulatada Platinum kaamil ah ayaa lagu qooyaa dhammaan caleenta qallalan / xawaash. Hawsha culus iyo awoodda sare ayaa ka dhigaysa qaniinyada dabaysha! Qalabka biriyaarka ah ee birlabka ah ee birlabka ah iyo 3 meelood oo ka kooban birta wax lagu shiido waxay hubineysaa inaadan lumin rusheeyaha geedahaaga.
Midab: Cawlan / Madoow / Cagaar / Buluug / Casaan / Qalin
Cabbir (Dhexroor x Dherer): 2 x 1.57 inji (50 x 40mm)
2.2 x 1.57 inji (55 x 40mm)
•HALISTA MACAANKA QARANKA EE DHAQANKA, CUDURKA CUDURKA - Platinum grinders qanjidhada dhirta oo dhan si aad u shiiddo dhammaan caleemahaaga qallalan / xawaash. Hawsha culus iyo awoodda sare ayaa ka dhigaysa qaniinyada dabaysha! Qalabka biriyaarka ah ee birlabka ah ee birlabka ah iyo 3 meelood oo ka kooban birta wax lagu shiido waxay hubineysaa inaadan lumin rusheeyaha geedahaaga.
• RAZOR-SHARP METAL TEETH, JOOJI FARSAMADA - Booqday qulqulka Platinum wuxuu ka samaysan yahay bir bir adag oo waara. Caarada Boorashka Mashiinka Masawirka leh wuxuu kuu xaqiijinayaa inaad maroojisid jilicsan; Booqday geedaha qallalan.
• SIYAASADDA MESH SCREEN FILTERS, SIYAASIINTA MADAXBADA - Qalabka noocan ah ee loo yaqaan 'platinum grinders' Boorashka geedaha leh Pollen Scraper waxay ka samaysan yihiin qalab tayo sare leh oo tayo sare leh oo dammaanad qaadaya waxqabadka wanaagsan iyo cimri dhererkiisa.
• ULTRA STRute LID MAGNET, QASHINKA QASHINKA - Magnet-ka ku yaal korka sare ee xirmadan ayaa xoog badan leh, Daboolka magnetized wuxuu si weyn u caawiyaa inuu yareeyo daadashada. Si ka duwan sida kale ee Booqday Furimaha kale ee caleenta daboolka ayaa si fudud hoos ugu dhacaya inta aad shaqeyneyso. Boorashkan qallalan ee dhirta leh oo leh magnet xoog badan ayaa daboolka si adag u hayo. Bukaan-wareejintani waa mid si fudud loo qalloocin karo mana sameyn doonto dhawaaqa macdanta qallafsan.
• SIXAAN BADAN, MUHIIM AH MUUQAAL CUTE TRAVEL GRINDER - Boortaha macdanta birta ku jirta ayaa ku habboon boorsadaada, Waxay la timaadaa xoqista manka, aad ayey ugufiican tahay, gabdhaha caanka ka ah. Haddii aad u maleynaysid inaad ka qoomameyn doonto ka dib markaad iibsato sheygan, ha ka cabsanin sababtoo ah tani waa gunta ugu fiican ee aad iibsan karto.
• FUDUD EE ISTICMAALKA & NADAAFADA - Boorashkan caleenta ah ee loo yaqaan 'Broher' wuxuu ka caawinayaa inuu waqtigaaga badbaadiyo maadaama ay aad u fududahay in la isticmaalo. Kaliya u wareeji dhabarka iyo gadaal dhowr jeer. Intaa waxaa dheer, khamrigu si fudud ayuu u nadiifsan yahay, kaliya u isticmaal saabuun iyo biyo oo xoqeyuhu wuxuu gacan ka geysan karaa in laga saaro wixii walxaha manka ka soo baxa.